गर्भवतीलाई किन लाग्छ वाकवाकी ? यस्तो छ डाक्टरको भनाई » खबरहरुको एउटै केन्द्र
गर्भवतीलाई किन लाग्छ वाकवाकी ? यस्तो छ डाक्टरको भनाई
आईतवार, जेष्ठ १३, २०७५ १७:१६ मा प्रकाशित !
नेपालमा प्रेग्नेन्सी टेस्ट गराउने प्रचलन निकै कम छ । सहरी क्षेत्रमा यसको क्रम बढे पनि ग्रामीण भेगमा भने अधिकांशले गराउँदैनन् । केही लक्षणका आधारमा गर्भवती भएको अड्कल लगाउँछन् । मुख्य रूपमा वाकवाकी र बान्तालाई गर्भवतीको संकेतका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । तर, गर्भ रहेपछि किन यस्तो हुन्छ त भन्ने कुरामा भने धेरै मानिस अनभिज्ञ हुन सक्छन् । कहिलेकाहीँ गर्भ नबस्दासमेत गर्भवतीको लक्षण देखिन सक्छ । यो एक प्रकारको समस्या हो । यसै विषयमा प्रियंका विकले नयाँ पत्रिकालाई बताएकी छिन् स्
७० प्रतिशत गर्भवती महिलालाई यस्तो लक्षण देखिने गरेको पाइन्छ । सामान्यतया वाकवाकी लाग्न गर्भवती भएको ४–८ हप्ताबाट सुरु हुन्छ । र, यो क्रम १३–१४ हप्तासम्म रहन्छ । कसैकसैलाई भने अलि पछिसम्म यसले दुःख दिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आमालाई त असहज हुन्छ । तर, पेटमा भएको बच्चालाई भने कुनै असर पु(याउँदैन ।
(बढी नै समस्या भएमा घरेलु उपचार विधि अपनाउन पनि सकिन्छ । त्यसका लागि वाकवाकी लाग्ने वा बढाउने खानेकुरा खानुहुँदैन । त्यस्ता खानाको गन्धबाट पनि टाढै रहँदा राम्रो हुन्छ ।
(बिहान उठ्नुअघि भिजाएर राखेको गेडागुडी खानुपर्छ । जसलाई भेज लाइक टोस्ट पनि भनिन्छ । र, त्यो खाएको केही समयपछि मात्र उठ्ने गर्नुपर्छ ।
(एकैपटक थुप्रै खाने बानीलाई सुधार गर्दा राम्रो हुन्छ । बरु थोरै–थोरै छोटो–छोटो समयको ग्यापमा खाँदा यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउन सहयोग हुन्छ । यसले स्वस्थ रहन पनि सहयोग पुग्छ ।
(नेपालीको खानासँगै पानी खाने संस्कार छ । तर, खानासँग धेरै पानी नखाँदा पनि यस्तो समस्याबाट केही हदसम्म छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
(यसै पनि गर्भवती आमाले आफ्नो स्वास्थ्य र भोजनमा विशेष ख्याल राख्नुपर्छ । त्यस्तै, वाकवाकी र रिंगटा लाग्ने समस्या बढी भएमा प्रशस्त आराम गर्न आवश्यक हुन्छ ।
(गर्भवती आमा बस्ने कोठा तथा घरको वातावरण खुला र राम्रोसँग हावा खेल्ने हुनुपर्छ ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
(यसलाई कम गर्न अदुवा राखेर कागतीपानी पनि खान सकिन्छ ।
(अधिक मात्रामा आइरनयुक्त खानाको प्रयोगले पनि यस्तो समस्यालाई धेरै घटाउन सकिन्छ । यसका लागि औषधि र चक्की पनि खान सकिन्छ । तर, स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा मात्र ।
(कतिपय गर्भवती आमालाई वाकवाकी तथा बान्ता हुने समस्या अत्यधिक हुन्छ । यसरी हुने बान्ताबाट शरीरलाई आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण तत्वहरूसमेत बाहिरिन सक्छ । त्यसैले यस्तो समस्या बढेमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्था पुग्न आवश्यक हुन्छ ।
(कहिलेकाहीँ मोलार प्रेग्नेन्सीका कारण पनि वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने समस्या हुन्छ । मोलार प्रेग्नेन्सीले गर्भवती भएजस्तै लक्षण देखाउँछ, तर पेटमा बच्चा भने हुँदैन । त्यसैले यसबारे पनि सजग हुन आवश्यक हुन्छ ।
PREVIOUS POST Previous post: आज देखि काठमाडौँ सहित देशभर तापक्रम वृद्धि
NEXT POST Next post: चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ५.५९ प्रतिशत रहने
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, जेष्ठ १३, २०७५ १७:१६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, जेष्ठ १३, २०७५ १७:१६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, जेष्ठ १३, २०७५ १७:१६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, जेष्ठ १३, २०७५ १७:१६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, जेष्ठ १३, २०७५ १७:१६